Ungayiqala njani iPodcast yeShishini lakho (ngezifundo ozifunde kum!) | Martech Zone
Lwesine, Matshi 4, 2021 NgoLwesine, Septemba 30, 2021 Douglas Karr
Ukuqala kwam ipodcast kwiminyaka eyadlulayo, bendineenjongo ezintathu ezahlukeneyo:
Igunya -Ngodliwanondlebe neenkokheli kwishishini lam, bendifuna ukwazisa igama lam. Ngokuqinisekileyo iyasebenza kwaye ikhokelele kumathuba athile amangalisayo-njengokunceda ukubamba ngokudibeneyo i-Dell's Luminaries podcast ekhokelele kwi-1% ephezulu yeepodcasts ezininzi ezimameleyo ngexesha lokusebenza kwayo.
namathemba - Andinantloni malunga noku… bekukho iinkampani endifuna ukusebenzisana nazo kuba ndibone ulungelelwano lwenkcubeko phakathi kwezicwangciso zam nezabo. Isebenzile, ndasebenza neenkampani ezithile ezimangalisayo, kubandakanya uDell, GoDaddy, SmartFOCUS, Salesforce, Uluhlu lukaAngie… nangaphezulu.
Voice -Njengokuba ipodcast yam ikhula, indinike ithuba lokuba ndibelane ngokubonakalayo nezinye iinkokheli kumzi mveliso wam ezazinetalente kwaye zikhula kodwa zingaziwa kakuhle. Andinantloni zokuba ndifuna ukwenza ipodcast ibandakanye ngakumbi kwaye yahluke ukuphucula ukubonakala kwayo kunye nokufikelela.
Oko kwathiwa, akukho lula! Izifundo ezifundiweyo:
Umzamo -Inzame zophando, ukuvelisa, ukupapasha, kunye nokwazisa umxholo kuthatha ixesha elide kunokwenza udliwanondlebe. Ke ipodcast yemizuzu engama-20 inokuthatha iiyure ezi-3 ukuya kwezi-4 zexesha lam ukuyilungiselela nokuyipapasha. Eli lixesha elibalulekileyo ngaphandle kwenkqubo yam kwaye yenze ukuba kube nzima kum ukugcina amandla.
Momentum -Njengoko kubhloga kunye nomsebenzi wemidiya yoluntu, kunjalo nepodcasting. Njengoko upapasha, ufumana abalandeli abambalwa. Oku kulandelayo kuyakhula kwaye kuyakhula… ke umfutho ubalulekile kwimpumelelo yakho. Ndiyakhumbula xa ndandinekhulu labaphulaphuli, ngoku ndinamashumi amawaka.
Cwangciso -Ndiyakholelwa ukuba ndingandisa ukufikelela kwam ukuba bendizimisele ngakumbi kwishedyuli yepodcast yam ngokunjalo. Ndingathanda ukwenza ikhalenda yomxholo ukuze, unyaka wonke, ndigxile kwisihloko esithile. Khawufane ucinge ngoJanuwari ka-Okthobha uyinyanga ye-e-yorhwebo ukuze iingcali zilungiselele ixesha elizayo!
Kutheni le nto ishishini lakho kufuneka liqale iPodcast?
Ngaphandle kwemizekelo endiyinike apha ngasentla, kukho izinto ezinyanzelisayo manani okwamkelwa kwepodcast ezenza ukuba ibe sisixhobo esiphakathi ekufuneka siphonononge.
I-37% yabantu baseMelika bamamela ipodcast kwinyanga ephelileyo.
Ama-63% abantu bathenga into yokusingathwa kwepodcast kwimboniso yabo.
Ngo-2022, kuqikelelwa ukuba ukumamela i-podcast kuya kukhula kube ngabantu abazizigidi ezili-132 eMelika bodwa.
Inkxaso-mali.co.uk, Uqoqosho lwezemali, kunye nokubonelela ngophando kunye nolwazi kumshicileli wewebhusayithi e-UK, wenza umsebenzi omangalisayo ekuhambeni kuyo yonke into oyifunayo ukuze ufumane ipodcast yakho. I-infographic, Isikhokelo samashishini amancinci sokuQala iPodcast uhamba ngala manyathelo abalulekileyo alandelayo… qiniseka ukucofa kwi-post yabo apho bongeza khona itoni yezixhobo!
Khetha Sihloko Nguwe kuphela onokuhambisa… qiniseka ukukhangela iTunes, Spotify, SoundCloud, kunye noGoogle Play ukubona ukuba ungakhuphisana na.
Fumana ilungelo Imakrofoni. Jonga eyam isitudiyo sasekhaya kunye neengcebiso ngezixhobo apha.
Funda indlela yokwenza hlela ipodcast yakho usebenzisa isoftware yokuhlela efana nokuzithemba, Ibhendi yeGarage (Mac kuphela), I-Adobe Audition (iza ne-Adobe suite yelifu). Kukho inani elikhulayo lamaqonga akwi-Intanethi kunye neeapps!
Rekhoda ipodcast yakho njenge yokuzonwabisa ke unokuyilayisha kwi-YouTube. Uya kumangaliswa ukuba bangaphi abantu lalela kwi Youtube!
fumana ukusingatha ngokukodwa eyakhelwe iipodcasts. Iipodcasts zikhulu, iifayile zokusasaza kunye neseva yakho yewebhu iya kutswina kububanzi bebhendi eyimfuneko.
Sinenqaku elinzulu lokuba ungaya phi host, syndicate, kunye nokwazisa ipodcast yakho ezo nkcukacha zayo yonke imikhosi eyahlukeneyo, umanyano, kunye neendlela zonyuselo onokuthi uzisebenzise.
Olunye uncedo oluya kum (olunepodcast enkulu) yile Inkampani yaseBrassy yoSasazo. UJen uncede amawaka abantu ukuba baqale kwaye bakhe isicwangciso sabo sokushicilela ishishini.
Owu, kwaye qiniseka ukuba ubhalisele Martech Zone udliwanoipodcast yam!
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa amakhonkco obulungu kulo lonke eli nqaku.
tags: ukuqala njani ipodcastukuhlela podcastAbahleli bepodcastiipodcast zemakrofonimanani epodcastizicwangciso zepodcastIingcebiso zepodcastiingcebiso zepodcastingqala ipodcast